Golaha shacabka maalin saddexaad u ballamay ka doodista amiga dalka – Kalfadhi
Kulan ay soo xaadireen 174 mudane oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa maanta ka dhacay xarunta Villa Hargeysa, waxaana uuna daba socday kulankii shalay looga dooday xaaladda amiga dalka.
Toddobo iyo labaatan mudane oo dooddii shalay harsanayd ayaanu ballanku ahaa maanta in ay aragtidooda amniga dalka la xariirta dhiibtaan. 13 toban ka mid ah ayaana halkaas ka hadlay.
Xildhibaannada ayaa aad ugu kala aragti duwanaa heerka amniga dalka. Qaarkood ayaana u arkayay in xaaladda amni ee dalka ay halis tahay, halka qaarkoodna aysan taas u muuqan.
Waa kuwaan qaar ka mid ah hadallada xildhibaannadii hadlay.
Xildhibaan Beenabeene” Raysul-wasaaraha dadka la xisaabtamayo waa anaga, meeshii laga rabay inuu aqbalo in dib u dhac jiro Wallaahi ma uusan aqbalin taas waa dhibaato. Xukuumaddu waa guul darraysatay amni kama jiro dalkan. Guddoomiye waxaan kaa codsanayaa markaan doodda soo dhammeysanno inaad halkan uga yeerto Raysul wasaaraha dalka si aan su,aallo u waydiinno”
Xildhibaan Cabdixakiin Macallin Axmed ” Garoommadii kubbadda cagta lagu ciyaari jirey waa la xirey Shabaab ayaa sidaas amray, xildhibaannada haddaanay masuuliyaddooda qaadan karin ha isaga tagaan xilka oo dadka yaan la sirin, wax qorshe badbaado ah haddii aanan loo haynin shacabkan daaley yaan la dibin dabyeenin, anniga waxaan codsanayaa si cad oo gambad lahayn Raysul-wasaaraha iyo xukuumaddiisa waddankan ha isaga tagaan wax waa qaban waayeene”
Xildhibaan Siciid Ciid ahan wasiirka wasaaradda Beeraha ” in Soomaaliya ay ciidamo u direyso South Sudan waa tallaabo hormar ah, adduunku wuu na amaanayaa balse iyadoo isbaddalkaas weyn iyo dib u kabashadaas aan ka qayb qaadno oo iyadoo adduunkoo dhan na amaanayo yaynaan inagu is-caayin.”
Xildhibaan Faysal Cabdulle ” waxa inta laga sheegay wuxuu ahaa wax aan sax ahayn, niyad jabna ku ah shacabka. Waxaa loo baahanyahay inaynu ka shaqayno waxbadan oo xal ah lakiin. Maalinba maalinta ka dambaysa waan soo hagaaynaa. Waa wax wanaagsan inaan joogteeynno la xisaabtanka Xukuumadda laakin si wanaagsan waa inaan u wajahnaa”
Intaa kaddib guddoonka Golaha Shacabka ayaa sheegay in maalinta barri ah ay kasii doodi doonaan xaaladda amni ee dalka. Waxaana la filayaa in ay hadlaan afar iyo tobanka mudane ee harsan.